Homeसमाचारकोरोनाको दोश्रो लहर – के हो त नयाँ कोरोना ? नयाँ र पुरानोमा के फ’रक ? (भिडियो सहित)
April 17, 2021 admin समाचार 5654
नेपालमा कोरोना सं’क्रमणको नयाँ चरण र नयाँ जटि’लता सुरु भएको । विभिन्न देशमा देखिएको कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्ट्सले युवा तथा बालबालिकाहरूमा संक्रम’णदर बढि छ । त्यसो त अहिले देखिएको भाइरस अलिक फरक भएको चिकित्सक बताउछन् ।
काठमाडौँ लगायत वि’भिन्न शहरमा कोरोना संक्रमण दोस्रो लहर बढ्न थालेको छ । अहिले देखिएको कोरोना भाइरस पहिले भन्दा बढी सं’क्रामक देखिएको विभिन्न अनु’सन्धानहरुले देखाएको छ ।
१० दिन यता सि’किस्त संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । सिकिस्त संक्र’मितमध्ये पनि यो महिना ५० वर्ष मुनिका बिरामी ५०% कै हा’राहारीमा छन् । जुन अघिल्लो ३ महिनाको तुलनामा संख्या’त्मक हिसावले दो’ब्बर जत्तिकै हो । कोरोना भाइरसको पछिल्लो संक्र’मणको विशेषता हेर्दा नेपालमा पनि नयाँ प्रजातिको संक्र’मण फैलिदै गएको हो ।
अहिले देखिएको कोरोनाको लक्षण पनि विग’तका जस्तै रुघाखोकी निमोनिया हुनेर र थप थकाई मह_सुष हुने, हल्का ज्वरो र केही सामान्य स्वास्थ्य सम’स्या आएपनि निमोनिया हुनेहरूको संख्या बढी रहेको चिकित्सक बताउछन् ।
अहिले टेकु अस्पतालमा पनि कोरोना सं’क्रमित विरामीले बेडहरु भरिएका छन् । खुल्ला भारतीय सीमा हुँदै नेपालीहरु नेपाल प्रवे’श बढेको र नयाँ प्रजातीको भाइरसले गर्दा धेरै संक्र’मित देखिएको उनी बताउछन् ।
भारतमा कोरोना सं’क्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । खुला सीमा भएकाले नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्र’भाव परेको देखिन्छ । बढ्दो संक्रमित संख्यालाई निय’न्त्रण गर्न भारतको धेरै ठाउँमा लक’डाउन समेत घोष’णा गरिसकेको हुँदा त्यहाँ कार्यरत धेरै नेपाली नेपाल फ’र्कन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले हेल’चक्र्याइ गर्याे भने नेपालमा कोरोना थप फैलन सक्ने सम्भा’वना देखिन्छ । इताजा खबरबाट
January 24, 2021 admin समाचार 6634
बाग्लुङकी लीला परियार । जो यतिबेला एउटी आफ्नै श्रीमानबाट पिडित भएर न्यायकोलागी न्यायलयको ढोका कसरी घचघच्याउने भन्दै भौतारि रहेकी छन् । आफ्नै गाउँमा डाक्टरको रुपमा गएका लीलाका श्रीमान बलिरामले लीलालाई आफुले मन पराउने कुरा बताए
प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य भन्छिन्: ‘काम गरेँ भनेर डम्फु बजाउनेहरु मेरो अगाडी आउन् म जवाफ दिन्छु’ (भिडियो सहित)
February 10, 2021 admin समाचार 6909
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध’र्मपत्नी तथा प्रथम महिला राधिका शाक्यले अहिले स’म्म नेपालमा अन्य नेताले गर्न नसकेको काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दा’वी गरेकी छन् । नेपाल प्रहरी अस्प्ताल महाराजगंजमा भेटिएकी उनले यस्तो दा’वी गरेकी हुन्
February 23, 2021 admin समाचार 5956